कृषि/सहकारी Archives | SawalNepal
कमल । झापाको कमल गाउँपालिकाले माटोमा अम्लिय पन बढे पछी कृषकहरुलाई कृषि चुन प्रयोगमा सहयोग गरेको छ । कृषि उपज उत्पादन बृद्धिका लागि विगत लामो समय देखि प्रयोगमा ल्याइएको रसायनिक मलका कारण माटोको उत्पादन शक्ति क्रमस ह्रास हुदै अम्लिय पन वढेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै कमल गाउँपालिकाले कृषक, कृषक समुह र सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि
दमक/नगरपालिका वडा नं. २ संगको सहकार्यमा स्थानीय प्रतिफल कृषि सहकारी संस्थाले यस वाडका किसानहरुलाइ अग्र्यानिक खेतीका लागि आकर्षित गर्न ब्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न शुरु गरेको छ । वडा कार्यालयको आयोजना र सहकारीको सञ्चालनमा भएको प्रथम चरणको कार्यक्रममा ८० किसानहरु सहभागि भएको सहकारीका अध्यक्ष खेम सापकोटा (के.एन) ले जनाएकाछन् । अर्को चरणमा थप यहि संख्यामा किसानहरुलाइ
दमक/झापा दमक वडा नं. ५ मा ८ महिना अघिदेखि सञ्चालनमा आएको सपोर्ट कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रथम बार्षिक साधरणसभा भब्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । कन्काइ पार्टी प्यालेस दमकमा भएको प्रथम साधरणसभामा छोटो अवधिमा नै ३ करोड १६ लाखभन्दा बढि निक्षेप संकलन गरिएको सहकारीका अध्यक्ष तुलसीराम दंगालले बताए । आउदो बर्ष बढाएर यसलाइ ७ करोड
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि धानको मूल्य तोकेको छ । बुधबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले मोटा धानको मूल्य २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको मूल्य २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा प्रतिक्वीन्टल तोकेको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषदले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नाम पोखरा मात्र राख्ने निर्णय
रत्ननगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट गाईलाई सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाका प्रमुख शालिग्राम पौडेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी गाईलाई सुत्केरी भत्ता दिन शुरु गरिएको हो । “अब साउन १ गतेबाट ब्याएका गाईले भत्ता पाउनेछन्, नगरपालिकाबाट पारित भइसक्यो, कार्यविधि बनेपछि वितरण शुरु हुन्छ तर त्यसका लागि प्रमाण भने पुर्याउनुपर्ने
शुकुमाया मोक्तान/लालबन्दी, सर्लाही । मेरो श्रीमान् साउदी जानुभएको छ । बिहे भएको एक वर्ष पछि उहाँ साउदी जानुभएको हो । अहिले ६ वर्ष लाग्यो । श्रीमान् साउदीमा बसे पनि मैले घर व्यवहार सम्हाल्नु परेको छैन । सासुससुराले नै घरव्यवहार मिलाउनुहुन्छ । तर घरव्यवहार धान्न पर्दैन भनेर म पनि हात बाँधेर बसेको छैन । श्रीमान् विदेश
५ दशकपछि बल्ल नेपाली चियाको यस्तो पहिचान
इलाम । नेपालमा चिया खेती शुरु भएको झण्डै १५४ वर्षपछि नेपाली अर्थोडक्स चियाले आफ्नै पहिचान पाएको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्ड, चिया उत्पादनसँग सम्बन्धित संघसंस्था र चियाविज्ञको लामो प्रयासपछि नेपाली अर्थोडक्स चियाले आफ्नो लोगो (ट्रेडमार्क) पाएको हो । हिमालको आकृतिसँगै ‘नेपाली टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालय’ लेखिएको लोगो नेपाली चियाले पाएको छ । यसअघि
मोरङमा माघमै सुरु भयो रोपाई
माघमा पनि धान रोपाइँ हुन्छ भन्ने धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर मोरङको हकमा भने त्यो सत्य सावित भएको छ । मोरङको रंगेली नगरपालिका–६ स्थित मधुवनी चोकमा माघ महिनाको जाडोयाममा महिला मजदूर एकाबिहानै देखि खेतमा धान रोप्न ब्यस्त छन् । सो क्षेत्रमा रहेको सयौँ बिगाहा खेतमा अहिले कृषक धान रोपाइँमा ब्यस्त भएका हुन् । रंगेलीका
बेमौसमी तरकारी खेती तालिम नवलपरासीमा सम्पन्न !
सहबान अन्सारी / नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका १५ पाेटहामामा २ दिने बेमौसमी तरकारी खेती तालिम सम्पन्न भएको छ। बिकल्प नवलपरासीकाे अायाेजना र युनाइटेड मिसन टु नेपालकाे सहयाेगमा तालिम गरिएको हाे। मनकामना कृषक समुहकी अध्यक्ष संगिता पन्जियारकाे अध्यक्षतामा बेमौसमी तरकारी खेती तालिम अाज सम्पन्न भएकाे हाे । कार्यक्रममा बाेल्दै मनकामना कृषक समुहकी अध्यक्ष पन्जियारले अहिलेकाे अवस्थामा बेमौसमी
सौजन्य साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न !
सहबान अन्सारी / नवलपरासी प्रतापपुर गाऊपालिका वडा नं ८ मा पिपरपातीमा सौजन्य साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ ! राजेश सिंहकाे अध्यक्षता तथा प्रतापपुर गाउपालिका प्रमुख राज कुमार शर्मा प्रमुख अथित्यता रहेको थियो ! कार्यक्रममा वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष कादिर अली अन्सारी, वडा न.६ का वडा अध्यक्ष